Etu ị ga -esi nweta Netflix na -enweghị kaadị kredit | Androidsis
A mụrụ Netflix dị ka ụlọ ahịa vidiyo nke na -ebuga ụlọ. Ka ịntanetị na -amalite, Netflix ghọrọ ihe nkiri vidiyo na -asọ asọ nke nwere ugbu a karịa ndị ọrụ 200 nde ọ dịkwa ugbu a n'ihe karịrị mba 190 n'ụwa, ewezuga na mba anọ (China, Crimea, North Korea na Syria).
Iji nweta katalọgụ sara mbara nke Netflix na -enye ndị ahịa ya, ọ dị mkpa iji akaụntụ ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma esi nweta Netflix na-enweghị kaadị akwụmụgwọN'okpuru, anyị na -egosi gị nhọrọ niile dị ugbu a.
Ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na n'isiokwu a anyị ga -egosi gị nhọrọ iwu niile dị. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ịntanetị anyị nwere ike ịchọta akaụntụ kwa afọ n'elu ikpo okwu a maka ọnụ ahịa dị ntakịrị, a na -ezuru akaụntụ ndị a, n'ọtụtụ oge, ma ọ bụ kwụsị ọrụ obere oge ka ewechara ha n'ọrụ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịfu ego, gaa n'ihu.
1 Ego ole ka Netflix na -eri
1.1 Atụmatụ nhazi
1.2 Standard Atụmatụ
1.3 Atụmatụ atụmatụ
2 Nkwekọrịta Netflix na -enweghị kaadị kredit
2.1 Debit kaadị
2.2 Kaadị onyinye
2.3 Kekọrịta akaụntụ
2.4 Kaadị mebere
2.5 Site na Paypal
2.6 Site na ụgwọ ekwentị anyị
2.7 Gba ụgwọ site na ndị ọzọ
2.8 Jiri oge nnwale efu
3 Ejila ụzọ megidere iwu
Ego ole ka Netflix na -eri
Netflix na -enye anyị ohere Ụdị ndebanye aha 3Onye ọ bụla n'ime ha na -enye anyị uru dị iche iche, yabụ anyị ga -eburu n'uche ma ihe ọ na -enye anyị yana ọnụahịa anyị dị njikere ịkwụ. Ọnụ ahịa nke atụmatụ ọ bụla m na -egosi gị n'okpuru, kwekọrọ na Ọgọst 2021.
Atụmatụ bụ isi na -enye anyị ohere ịmegharị otu oge (naanị otu onye nwere ike iji ikpo okwu), ọ na -enye anyị ohere ibudata ọdịnaya na ngwaọrụ ma ọ naghị enye ogo HD. Ọnụahịa ya bụ 7,99 euro.
Atụmatụ ọkọlọtọ na -enye anyị mmeputakwa oge abụọ, ngwaọrụ 2 ebe anyị ga -ebudata ọdịnaya iji kpọọ offline na ogo HD. Ọnụahịa ya bụ 11,99 euro.
Atụmatụ adịchasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịm nke mbụ, ebe ọ na -enye anyị ogo Ultra HD (4K), ruo ihuenyo 4 iji nweta ọdịnaya n'otu oge yana ngwaọrụ anọ iji budata ọdịnaya. Ọnụahịa ya bụ 15,99 euro.
Nkwekọrịta Netflix na -enweghị kaadị kredit
Ejikọtara kaadị kredit na akụkọ ụlọ akụ anyị, ebe ọ na -enye anyị ohere zụta kredit ma kwụọ ya na ngwụcha ọnwa ma ọ bụ yigharị ịzụrụ ihe. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịnweta akaụntụ kredit ma ọ bụ na anyị achọghị ịkwụ ụgwọ mkparị nke ụfọdụ ụlọ akụ na -ana, anyị nwere ike họrọ kaadị debit.
Kaadị akwụmụgwọ kwụọ ụgwọ ịzụrụ ihe n'oge azụmahịa ahụ, yabụ anyị ga -eburu n'uche inwe ezigbo ego na akaụntụ ahụ tupu ịkwụghachi kwa ọnwa na Netflix.
Otu nhọrọ na -atọ ụtọ ịbanye na Netflix na -ejighị kaadị kredit bụ iji kaadị onyinye. Kaadị onyinye ndị a gụnyere nguzozi nke a na -eri kwa ọnwa dabere na atụmatụ ịkwụ ụgwọ nke anyị họrọla.
Enwere ike iji kaadị onyinye Netflix maka ha abụọ akaụntụ ọhụrụ dịka maka akaụntụ dị adị. Mgbe itule na -agwụ, ị ga -enweta ozi na -akpọ gị oku ka ị gbanwee usoro ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ zụta kaadị onyinye ọzọ.
Kaadị onyinye Netlix ndị a dị na ndị tobacconist, akwụkwọ akụkọ, Media Mark, Egwuregwu na Logista n'etiti ndị ọzọ.
Otu n'ime ụzọ dị ọnụ ala iji nweta nkwekọrịta Netflix na -ejighịkwa kaadị kredit bụ site na ịkekọrịta akaụntụ n'etiti ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ. N'okwu ndị a, atụmatụ kacha atụ aro bụ Premium, ebe ọ na -enye ohere ka mmadụ 4 nwee ike ịbanye n'elu ikpo okwu ọnụ.
Ọnụ ahịa atụmatụ a bụ euro 15,99, nke kewara n'etiti mmadụ anọ ọ na -efu euro 4 (ngụkọta) ruo ọnwa. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị anaghị elekọta ịkwụ ụgwọ mana nyefe ya ndị ọrụ akaụntụ ahụ, mkpa iji kaadị kredit ga -apụ n'anya kpamkpam.
N'ahịa anyị nwere ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ ị ga -enwe kaadị kwụrụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ, kaadị ndị na -arụ ọrụ dabere na itule anyị tinyegoro na mbụ. Ụdị kaadị ndị a dị mma ijikwa mmefu anyị na -eme maka ọrụ ụfọdụ yana ịzụrụ site na ịntanetị na weebụsaịtị ndị na -adịghị akpali oke ntụkwasị obi n'ime anyị.
Site na Paypal
Ụzọ ọzọ Netflix na -enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ maka iji ikpo okwu ya bụ PayPal. Iji PayPal ọ dịghị mkpa inwe kaadị kredit ma ọ bụ debe ego (ọ bụ ezie na akwadoro ya) ebe anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ebubo niile ozugbo na akaụntụ akụ anyị.
Site na ụgwọ ekwentị anyị
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa:
Telco na -amaghị nwoke
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ndenye aha gị kwa ọnwa site na akwụkwọ ọnụahịa nke onye ọrụ gị, akwụkwọ ọnụahịa a na -akwụ ụgwọ ozugbo na akaụntụ akụ anyị.
Gba ụgwọ site na ndị ọzọ
Na mgbakwunye na inwe ike iji ụgwọ ekwentị anyị kwa ọnwa, Netflix na -enyekwa gị ohere ịbanye ọrụ site na:
Movistar + ngwugwu
Ngwakọta R USB
Ihe ngwugwu Virgin telco
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa nke otu n'ime ndị na -ahụ maka ọrụ a, ị nwere ike kwụsị na nke a njikọ ịhụ ka ị ga -esi were ya n'ọrụ gụnyere ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa site na Netflix na ụgwọ maka ọrụ ndị a.
Jiri oge nnwale efu
Ọ bụ ihe nwute, nhọrọ a adịkwaghị site na etiti 2020. Netflix wepụrụ ọnwa ikpe n'efu na ọ nyere na kama, ọ na -enye ndị ọrụ niile nkwekọrịta ọnwa nke abụọ nke ndenye aha nke na -enye anyị atụmatụ ịkwụ ụgwọ dị iche iche.
Agbanyeghị na oge ekwuputara kagbuo oge efu, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ bụ nnwale na mkpebi ahụ nwere ike ọ gaghị adịgide adịgide, ọ dịbeghị. Ọ bụrụ na ị na -atụ anya ịnwale ikpo okwu a na ọnwa efu, ị nwere ike ichefu banyere ya.
Ejila ụzọ megidere iwu
Ọtụtụ bụ ibe weebụ nke njikọ iji budata ọdịnaya nke na -akpọ anyị ka anyị banye na Netflix site na ụzọ ndị akọwaghị anyị mana nke na -anọchite anya nnukwu ego mgbe ị na -eme nkwekọrịta otu afọ zuru oke. Ha anaghị agwa anyị gbasara mmalite ụdị akaụntụ ndị a, mana n'ọtụtụ ikpe, ndị a bụ akaụntụ e zuru.
N'ịbụ ndị ezuru akaụntụ, mgbe onye nwe akaụntụ ahụ matara na ha na -eji akaụntụ ha na -enweghị nkwenye ha, ha na -agbanwe okwuntughe ma anyị furu efu ego na anyị gaara akwụ ụgwọ. Ụfọdụ na -emesi anyị obi ike na ha ga -edochi akaụntụ ma ọ bụrụ na ọ kwụsị ịrụ ọrụ, mana ịbụ omume iwu na -akwadoghị, gaa mee mkpesa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gụgharia » Etu ị ga - esi nweta Netflix n’enweghị kaadị
Egwuregwu 6 kacha mma maka ntutu isi maka gam akporo